RASMI: Isku Aadka Wareega Afar Dhamaadka Copa del Rey Oo La Soo Saaray. Ayay Ku Soo Aaday Barcelona? - Wargane News
Home Sports RASMI: Isku Aadka Wareega Afar Dhamaadka Copa del Rey Oo La Soo...
Waxaa dhawaan la soo saaray isku aadka wareega afar dhamaadka Copa del Rey iyadoo kooxda Barcelona ay ku soo aaday kooxda Valencia waxaana ay lugta hore ee kulankaan ay ka dhici doontaa garoonka Camp Nou.
Kooxda difaacaneysa koobkaan ee Blaugrana ayaa ka soo talaabsatay wareegii sideeda kooxood kooxda Athletic Bilbao waxaana finalkoodii seddexaad ee isku xigta ee Copa del Rey ka hortaagan kooxda Gary Neville ee Valencia.
Los Che ayaa iyaga ka soo gudbay kooxda La Palmas oo ay xalayto 1-0 kaga soo badiyeen lugtii labaad ee wareega 8da, waxaana tababaraah ku meel gaarka ah ee Valencia Gary Neville uu heli doonaa fursad uu ku gaaro finalka lixdiisii bilood ee ugu horeysay.
Kulanka kale ee wareega afar dhamaadka waxaa iska horimaanaya kooxda Sevilla oo lugta hore soo dhaweyn doonta kooxda Celta Vigo. Sevilla waxa ay wareegii 8da ka soo talaabsatay xalayto kooxda heerka hoose ee Mirandes halka Celta Vigo ay si lama filaan ah uga soo gudubtay Atletico Madrid.
Lugta hore ee semi-finalka waxaa la ciyaari doonaa 3da bisha Febraayo halka lugta labaad ee wareega afar dhamaadka la ciyaari doono 10ka bisha Febraayo.